HIM | Health in Myanmar » 2012 » August
တောင်ပြုန်းပွဲ၌ ကွန်ဒုံးနှင့် ပညာပေးစာစောင် ပေးဝေ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ကွန်ဒုံး, ဂေး
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အမျိုးသား အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ် အောက်မှာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြတာပါ” ဟု Myanmar Busin- ess Collection of Aids မှ စီမံကိန်းအရာရှိ ဒေါက်တာဌေးမောင်က ပြောသည်။
STI control has not been shown to decrease the incidence of HIV in populations
Though it still appears in many guidance documents, sexually transmitted disease control has not been shown to decrease the incidence of HIV in populations. How long will it be before it is quietly dropped from publications and we can stop wasting HIV funding on it? [him] moderator ++++++++++++++++++ http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2808%2960896-X/fulltext
အမေးအဖြေ (၆၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A8 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
D and C လုပ်တာကို ရာသီလာတာလို့ သဘောထားပြီး ကလေးမယူချင်သေးရင် အဲဒီ နောက်ပိုင်း အတွက် တားဆေး၊ တားနည်း လုပ်ရမယ်။ ယူမယ်ဆိုလဲ ၂ လလောက် ရာသီ မှန်ပြီးမှ ကလေးယူတာပိုကောင်းတယ်။
First the outgoing UN envoy in HIV, Nafis Sadiq, paidavisit. Then Gabriel Jaramilo, the General Manager of the Global Fund, dropped by. A week from today Ambassador Eric Goosby, the US Global AIDS Coordinator, will arrive. There isalot of interest in Myanmar. What are the successes that can be showcased? A […]
HIV ထိန်းချုပ်ဆေးသစ် တမျိုးအား အမေရိကန် FDA မှခွင့်ပြု
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အခွင့်အရေး, ဆေးဝါး
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူဟု သတင်းကြီးသော ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင်မူ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် များအား မည်ကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ကို လေ့လာစောင့်ကြည့် ရပါဦးမည်။
Request for information on drug testing
Would anyone from Myanmar like to respond to this request for information? [him] moderator ++++++++++++++++++ Open Society Foundation’s International Harm Reduction Development Program is trying to learn more about use of drug testing in various countries across the world. We aren’t interested in testing of drivers, pilots or other employees, or in use of drug […]
အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေ
Author: HimBur | Category: Myanmar, News, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, PLH, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ တံတောင်ဆစ်အတွင်းဘက်မှာ အနီစက်လေး တစ်ခု ပေါ်နေပါတယ်ဗျ။ နည်းနည်း ကြာပြီ ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒါက AIDS ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ်။
Comment on AIDS 2012
Here isacomment fromareader on the Washington, DC conference called AIDS 2012 last month. [him] moderator ++++++++++++++++++ I amabit concerned about the cost of these conferences, Washington being the last one. How many people went there? Is there any assessment of what they learned compared with the money they have […]
အမေးအဖြေ (၆၃) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A52 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော်ကို အပေါင်းသင်းတစ်ယောက်ကပြောလို့ပါ။ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ မကောင်း ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ရှင်းပြပေးပါအုံး..
Notice how the Global Fund, in an subtle way, takes credit for all thirty-nine thousand people currently on antiretroviral treatment. [him] moderator ++++++++++++++++++ ForaHealthy Myanmar Global Fund 23 August 2012 Gabriel Jaramillo, General Manager of the Global Fund, recently travelled to Myanmar, where strong gains have been achieved against HIV and AIDS, TB […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, PLH, အခွင့်အရေး
ပြည်တွင်းက လူတွေ ပြောချက်အရကတော့ ဒီလူနာဟာ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် တစ်ယောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်ဆိုလို့ ရေးလိုက်မိတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အေစ့်ရောဂါနဲ့ သေသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ရွာက လူတစ်ဦး အကြောင်းကို ကျွန်တော် ပြန်သတိယ မိပါတယ်။
အမေးအဖြေ (၆၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: HIV, STD, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV အပြင် VDRL စစ်ရင် ဆစ်ဖလစ် ရှိ-မရှိ သိမယ်။ ကျန်တာတွေကို တကယ်လိုအပ် မှသာ စစ်ပါတယ်။ ART မသောက်ခင်က HIV နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို စစ်ပြီးသာဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။